Portable-kery fanefitra Analyzer
Digstive Tract-pitiliana Kit
Taovam-pisefoana-pitiliana System Kit
Renal Function-pitiliana Kit
Fizahana aretina Kit (Colloidal G ...
Fizahana aretina Kit for D-Dimer ...
Fizahana aretina Kit (LaTeX) for Rotavirus Group A
Fizahana aretina Kit (LaTeX) for Rotavirus vondrona A Fa in vitro fizahana aretina fampiasana Vakio ihany io fonosana ampidiro tsara talohan'ny mampiasa sy manaraka ny toromarika hentitra. Azo itokisana ny vokatra sahy miteny tsy azo antoka raha toa ka misy deviations avy ny torolalana ao amin'ity Insert fonosana. AMPIASAO-pitiliana natao Kit (LaTeX) for Rotavirus vondrona A dia mety ho hatsaran'ny mamantatra ny Rotavirus vondrona A amin'ny olombelona antigen fecal santionany. Fitsapana ity dia natao ho antsika fitsaboana matihanina ...
Fizahana aretina Kit (LaTeX) for Rotavirus vondrona A sy adenovirus
Fizahana aretina Kit (LaTeX) for Rotavirus vondrona A sy adenovirus in vitro fizahana aretina Fa fampiasana Vakio ihany io fonosana ampidiro tsara talohan'ny mampiasa sy manaraka ny toromarika hentitra. Azo itokisana ny vokatra sahy miteny tsy azo antoka raha toa ka misy deviations avy ny torolalana ao amin'ity Insert fonosana. AMPIASAO-pitiliana natao Kit (LaTeX) for Rotavirus vondrona A sy adenovirus no mety tsara ho an'ny hatsaran'ny mamantatra ny Rotavirus Vondrona A sy adenovirus antigen amin'ny olombelona fecal santionany. Izany Te ...
Fizahana aretina Kit (Colloidal Gold) for IgM Antibody ny Human Enterovirus 71
Fizahana aretina Kit (Colloidal Gold) for IgM Antibody ny Human Enterovirus 71 Fa in vitro fizahana aretina fampiasana Vakio ihany io fonosana ampidiro tsara talohan'ny mampiasa sy manaraka ny toromarika hentitra. Azo itokisana ny vokatra sahy miteny tsy azo antoka raha toa ka misy deviations avy ny torolalana ao amin'ity Insert fonosana. AMPIASAO-pitiliana natao Kit (Colloidal Gold) for IgM Antibody ny Human Enterovirus 71 dia volamena colloidal immunochromatographic sahy miteny fa ny hatsaran'ny tapa-kevitra ny IG ...
Unit 401-2, No.1 Jinzhong Road, Huli District, Xiamen, Sina